स्वास्थ्य – Page4– shubhabihani
‘ब्लु बल्स’ अर्थात उत्तेजित हुँदा पुरुषको अण्डकोष दुख्ने समस्याको २ उपाय
‘ब्लु बल्स’ यौन असन्तुष्टीको शारीरिक नतिजा हो। यौन उत्तेजना बढेको बेला पुरुषको अण्डकोष अत्याधिक दुख्ने, अनि कतिपय केशमा अण्डकोष सुन्निने अनि रंग पनि गाढा भए ब्लु बल्स समस्या भएको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अधिकांस पुरुषहरुले भोग्ने गरेका छन्।
अधिकांस समय यौन उत्तेजना चरम हुँदा पनि शारीरिक सम्पर्क भएन वा वीर्य स्खलन हुने मौका पाएन भने अण्डकोष दुख्ने गर्छ।
यौन अगंमा रगतको दवाव कम नहुँदा यस्तो समस्या हुन्छ। भलै यो विषयमा विस्तृत विवरण भेटिदैन तर यो समस्याबाट बच्न यौन अंगमा रगतको दवाव कम गराउनु पर्छ।
यसको लागि उत्तेजना भएपश्चात यौन सम्पर्क हुने वातावरण नमिले हस्तमैथुन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। यो गर्दा वीर्य स्खलन हुन्छ, लिङ्गमा रगतको दवाव कम हुन्छ अनि ब्लु बल्स हुन पाउँदैन।
अर्को उपाय भनेको केही गह्रौ वस्तु उचाल्ने वा कसरत गर्ने ताकि रगतको प्रवाह शरिरको अन्य अंगमा बढोस्।
तौल घटाउँछ अनि डण्डिफोर भगाउँछ, अनारका सेवनका १० फाइदा
अनार सेवनले बढ्दो उमेरसंगै देखिने समस्या कम गर्छ र जवान रहन मद्दत गर्च। यो फाइबर, भिटामिन सी र एन्डिअक्सिडेन्टको राम्रो स्रोत हो, जसले कमजोरी हुन दिदैन र मुटुसम्बन्धि समस्याबाट पनि बचाउँछ।
१. अनारले शरिरको फ्याट कम गर्छ र तौल कम गर्न मद्दत गर्छ।
२. अनारको जुसमा अधिक फाइबर हुन्छ। दैनिक अनार वा यसको जुस सेवनले पाचन प्रक्रिया ठिक रहन्छ साथै कब्जियत हुन पाउँदैन।
३. अनारले शरिरमा कोलस्टोरको स्तर नियन्त्रणमा राखि मुटुको समस्याबाट बचाउँछ।
४. यसमा अधिक पाइने भिटामिन ईले अनुहारमा चाउरी कम गर्छ।
५. अनारमा भिटामिन ए प्रशस्त पाईन्छ। आँखाको ज्योतिको लागि अनार खानुस्।
६. यसमा पाइने आइरनले शरिरमा रगतको कमी (एनीमिया) हुन दिदैन।
७. अनारमा पाइने भिटामिन सीले शरिरमा उर्जा दिन्छ साथै कमजोरी हुन दिदैन।
८. अनारमा पाइने एन्टिअक्सीडेन्टस्ले डन्डिफोर कम गर्न पनि सहयोग गर्छ।
९. अनारको जुस पिउँदा रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्छ।
१०. अनारले मृगौला सम्बन्धि समस्या कम गर्न पनि मद्धत गर्छ।
छोटा पहिरन लगाएका महिलाहरूलाई हेरिरहन मन लाग्छ ( यौन मनोविज्ञान )
भाद्र २८ , २०७३-
म ३३ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मलाई छोटा पहिरन तथा स्वीमिङ ड्रेस लगाएका महिलाहरूलाई हेरिरहन मन लाग्छ र त्यसबाट यौन उत्तेजनासमेत महसुस हुन्छ । यस्तो कुरा विवाहपछि हट्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर हटेन । म श्रीमतीसँग भने सन्तुष्ट छु, तर मलाई किन यस्तो भएको होला भनेर दुविधा हुन्छ ? कृपया मेरो समस्याका बारेमा प्रस्ट पारिदिनुहोला । मि.
तपार्इंले अनुभूति गरेको कुरामा तपाईंको मनमा विभिन्न दुविधा भएको महसुस भैरहेको हो कि जस्तो बुझिन्छ । यदि त्यसो हो भने तपार्इंमा उब्जिएको दुविधा पछि गएर मनोरोगमा परिणत हुन सक्छ । पछि गएर महिलालाई देखेर हुने यौन उत्तेजनाभन्दा तपाईंको दुविधाले चाहिँ तपाईंको दैनिक जीवनलाई असर गर्न थाल्छ ।
त्यसले श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्छ । तपाईंको कुराअनुसार अहिलेसम्म तपाईंको श्रीमतीसँगको सम्बन्ध राम्रो छ, त्यसैले तपार्इंले हाल महसुस गर्नुभएको दुविधा अनि महिलाप्रतिको आफ्नो अनुभूति आफ्नी श्रीमतीसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ ।
पुरुषले महिलालाई देख्दा उत्तेजना हुने कुरालाई लिएर धेरै लेख एवं पुस्तकहरूमा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । ती लेखमा पुरुष नै महिलाभन्दा बढी यौन उत्तेजित हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । पुरुषहरूमा यसरी बढी यौन उत्तेजना हुनुको पछाडि यौन उत्प्रेरणा, लैङ्गिक भूमिकाको अपेक्षा तथा यौनसम्बन्धी अवधारणाको प्रभाव हुन सक्छ । यो विषयमा धेरैले चर्चा गरिरहने हँुदा यससम्बन्धी अनेकन् अनुसन्धान पनि भएका छन् ।
टपटेन रिभ्यू डटकमअनुरूप गएको वर्ष ४० करोड वयस्कले पोर्नाेग्राफी वेबसाइट हेरेका थिए, जसमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष तथा २८ प्रतिशत महिला भएको बताइएको छ । विभिन्न प्रोयोगात्मक अध्ययनले महिलाभन्दा पुरुषमा देखेर हुने यौन उत्तेजना बढी हुने कुरा बताइए पनि त्यस्तो किन भएको हो भन्ने कुराचाहिँ अझै अनुसन्धानकै विषय रहँदै आएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा महिला र पुरुष दुवैलाई एकै प्रकारको यौन उत्तेजना हुने दृश्य देखाइएको थियो र दुवैमध्ये कसमा बढी उत्तेजना हुन्छ भनेर यौन उत्तेजना मापन गर्ने यन्त्र जडान गरिएको थियो । त्यस क्रममा यन्त्रको प्रयोगमार्फत उत्तेजना हुँदा यौनाङ्गमा रगतको प्रवाह, मुटुको गति, रक्तचाप, यौनाङ्गको प्रतिक्रिया कति हुन्छ भनेर मापन गरिएको थियो । यसरी गरिएको अनुसन्धानले महिला तथा पुरुष दुवैमा एकै किसिमको प्रतिक्रिया अनि यौन उत्तेजना पनि बराबर भएको पाइयो ।
उक्त अनुसन्धानले महिला र पुरुष दुवैमा देखेर हुने यौन उत्तेजना र दृष्टि क्षमता बराबर हुने कुरालाई पुष्टि गर्‍यो । धेरैजसो संस्कृति अनि समाजमा महिलाले आफ्नो यौनइच्छा अभिव्यक्त गर्ने कुरालाई पापका रूपमा लिइन्छ त कतै त्यो सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुँदैन । कतिपय समाजमा यदि महिलामा यौनइच्छा जागृत भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता हुन्छ । त्यसैले धेरैजसो संस्कृतिमा महिलाले सजिलैसँग आफ्नो यौनइच्छा व्यक्त गर्दैनन् । त्यसैले पनि कतिपय लेख वा पुस्तकले महिलामा देखेर हुने यौन उत्तेजनाको क्षमताका बारेमा ठोस रूपमा उल्लेख गर्न नसकेका होलान् ।
तपार्इंले बुझ्नैपर्ने अर्को कुरा के हो भने तपाईंमा छोटा पहिरन वा स्वीमिङ ड्रेस लगाएका महिलालाई देखेर यौन उत्तेजना मात्र हुने हो कि उनीहरूसँग यौनसम्पर्क पनि राख्न मन लाग्ने हो ? तपाईंले यसमा पनि प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । यदि त्यस्ता महिलासँग यौनसम्पर्क गर्ने इच्छा पनि हुने हो भने तपाईं कुनै पनि बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ र यसले तपाईंको करियर एवं व्यक्तित्वमै आघात पुर्‍याउन सक्छ । आफ्नो समस्याको पहिचान समयमै गर्न सके तपाईंलाई सजिलो हुनेछ । साप्ताहिक
‘एक हजार १२७ फिजियोथेरापी सेवाबाट लाभान्वित’
२७ भदौ, काठमाडौं । भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाका एक हजार १२७ जनाले फिजियोथेरापी सेवा लिएर लाभान्वित भएका छन् ।
हालसम्म सात फिजियोथेरापी÷पुनःस्थापना एकाइमार्फत ५५२ थान अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दैनिक जीवनयापनमा सहयोग गर्ने ह्विलचियर, वैशाखीलगायत विभिन्न सहयोगी सामग्री वितरण गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका उपनिर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए ।
कार्यक्रममा भूकम्पका बेला मात्र नभएर अन्य बेलामा पनि फिजियोथेरापी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र दैनिक सवारी दुर्घटनाबाट हुने घाइतेका लागि पनि सो सेवा आवश्यक रहेको बताए ।
म दुब्लो हुनुमा हस्तमैथुनको कुनै भूमिका छ ? यौन जिज्ञासा र समाधान
भाद्र २६ , २०७३-
साभार : साप्ताहिक पत्रिका
सुरुमा यसले खासै असर नगरे पनि पछि यसले सिरोसिस भई क्यान्सर समेत हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनि भन्छन्, ‘‘कलेजोमा बोसो जम्ने रोगलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । बिरामीले रहनसहन, जीवनशैली र खानपानमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । खानामा हरियो सागसब्जी, पलफूलको मात्रा बढाउने, काब्रोहाइट्रेड कम खाने, रक्सी नखाने, व्यायाम गर्ने हो भने यो समस्यामा मुक्त रहन सकिन्छ ।’’
उनले कलेजो बिग्रदै गएमा स्मरणशक्ति कम हुने, शरीर पहेँलो हुँदै जाने र कमलपित्त हुने, खुट्टा र पेट सुन्निने, बाँझोपन र नपुंशक हुने, मुख र शरीरको अन्य भागबाट रगत आउने, शरीर सुक्दै जाने जस्ता लक्षण देखिने पनि बताए ।
डा शर्मा सबै रक्सी सेवन गर्नेलाई यो समस्या नहुन पनि सक्छ तर तुलनात्मक रुपमा पुरुषभन्दा बढी महिलामा बढी देखिने गरेको बताउँछन् ।
१८ भदौ, काठमाडौँ।
वृद्धावस्थामा लाग्ने अल्जाइमर अर्थात् विस्मृति रोगका बारेमा पर्याप्त जनचेतना नहुँदा बिरामी र परिवारले कष्ट झेल्नु परेको छ ।
बुढेसकालमा लाग्ने रोग भएकाले मानिसले यसलाई बुढ्यौलीमा हुने लक्षण ठान्ने गरेकाले बिरामी र परिवारलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ । बुढेसकालमा लाग्ने डिमेन्सिया समूहको अल्जाइमर रोग पाँच प्रतिशतमा देखिने चिकित्सक बताउँछन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन अस्पतालका ज्येष्ठ नागरिक विशेषज्ञ डा रमेश कँडेल यो ज्येष्ठ नागरिकमा लाग्ने कडा किसिमको बिस्तारै बढ्ने मानसिक रोग भएको बताउँछन् । डिमेन्सियाले सोच्ने, विचार गर्ने, योजना बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता घटाउँदै लैजाने उनको भनाइ छ ।
अल्जाइमर विस्मृति समाज नेपालका अध्यक्ष डा गौरीशङ्करलाल दास अन्य रोगका लागि सरकारले खर्च गरे पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई लाग्ने यो रोगप्रति ध्यान पुग्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, “सरकारले अन्य रोगको उपचारका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ तर ज्येष्ठ नागरिकमा देखिने यो रोगलाई अझै पनि नजरअन्दाज गरेको छ ।”
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका उपाध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठ यो रोगबाट पीडित बिरामी रोग लागेपछि धेरै समयसम्म बाँच्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि परिवारको सहयोग चाहिने बताउँछन् ।
भाद्र १७, २०७३- म २३ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो पाठेघरमा समस्या भएकाले डाक्टरले यौनसम्पर्क नगर्नु भन्नुभएको छ, तर मेरो श्रीमान् मलाई मुखमैथुन र गुदा मैथुनका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ । त्यसमा असमर्थता व्यक्त गर्दा उहाँ रिसाउनुहुन्छ । अब मैले के गर्दा उपयुक्त होला ?
कब्जियतबाट जोगिन पानी पिउनुहोस्
हामीले खाएको खाना राम्रोसँग पच्नुपर्छ । खाना राम्ररी पाचन भयो भने त्यसबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ । हामीले खाँदा नपचेको बाँकी पदार्थ ठूलो आन्द्रामा गएर जम्मा भएको हुन्छ । हामीले खाएको खाना राम्ररी निष्कासन भएन भने कब्जियत हुने हो ।
कब्जियत भनेकै अन्य रोगहरूको जन्मदाता हो । कब्जियतकै कारण थुप्रै रोग लाग्छन् । कब्जियत हटाउन अनेक उपचार विधि छन् । सहज र घरमै आफैंले गर्नसक्ने पहिलो उपचार भनेको प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु हो । यो सजिलो, सुलभमात्रै होइन प्रभावकारी विधि पनि हो । बिहान उठेपछि एक लिटर सकेसम्म मनतातो पानी पिउनु उत्तम हुन्छ । हामीले यसरी पिएको पानीले पेटमा रहेको फोहोर वस्तु पखालेर निकाल्न सघाउँछ । बिहानको पानी ठोस पदार्थ, चिया, कफी नखाएर पिउनुपर्छ । यसरी पिएको पानीले मानिसलाई मूत्र विकार, ग्यास्ट्रिकबाट पनि बचाउँछ ।
सामान्य कारणले आँखा, पैतला जलन हुने, पत्थरी र मिर्गौलासम्बन्धी रोग हुनबाट समेत बिहानको पानी सेवनले बचाउँछ । टाउको दुख्ने समस्या, पिसाब पोल्ने समस्या र रगत शुद्ध गर्न पनि यसले सघाउँछ । पानीले स्मरण शक्ति बढाउन र कालोपोतो हटाउन पनि भूमिका खेल्छ । प्रशस्त पानी पिउनाले मुहार उज्यालो बनाउनुका साथै चाउरीपन रोक्न र छाला कोमल बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।
स्वास्थ्यविज्ञको सुझावलाई मान्ने हो भने एकजना वयस्कले दिनमा चारदेखि पाँच लिटर पानी पिउनु राम्रो मानिन्छ । खाना खानुभन्दा एक घन्टापहिले र खाएको दुई घन्टापछि मात्र पानी पिउनु लाभदायक मानिन्छ । खाना खाइरहँदा सकेसम्म पानी पिउनु राम्रो होइन, अझ टाढाबाट ‘आँ’ गरेर त पानी पिउनै हुँदैन । गिलासमा मुख जोडेर पानी पिउने गर्नाले पानी श्वासनलीमा जाने खतरा हुँदैन । साँझको बेला खाना खाएको एक घन्टापछि मात्र पानी पिउनुपर्छ । सुत्ने बेला मनतातो पानी पिएर सुतेमा मन्द टाउको दुखाइ कम हुनुका साथै मीठो निद्रा लाग्छ ।
प्यास लागेको अवस्थामा चिया, कफी, अन्य पेय पदार्थ पिउनु थप कब्जियत निम्त्याउनु हो । पानी नै पिउनु उत्तम हुन्छ । मानिसको शरीरमा ५० प्रतिशत खाना, २५ प्रतिशत पानी र २५ प्रतिशत पेट खाली हुनुपर्छ । खाना खाँदा थोरै अझ खान इच्छा हुँदाहुँदै छोडिदिनु उत्तम हुन्छ । खाना खाने बेला कोचीकोची खानु हुँदैन । पेट केही खाली छोड्नुपर्छ ।